यौन आनन्दमा महिलाको योनीको आकर्षण ! « Ok Janata Newsportal
यौन आनन्दमा महिलाको योनीको आकर्षण !
काठमाडौं । विश्वका विभिन्न मानिसमा यौन चाहाना हुन्छ । यो कुनै नौलो विषय पनि होइन । विभिन्न मुलुकमा यसलाई आ–आफ्नो संस्कृति र इज्जत अनुसार लिइन्छ ।
महिलाको योनीको आकारले यौनान्दमा के फरक पर्छ ? यो युगौंदेखि उठ्दै आएको प्रश्न हो । यो प्रश्नबारे बढी चासो राख्नेहरुमा पुरुष रहने गर्छन् तर स्वयं महिलाको हकमा पनि यो कुरा कम चासोको विषय चाहिँ होइन ।
‘‘योनी अत्यन्तै लचिलो, इलास्टिक जस्तो खुम्चने र तन्कने क्षमता भएको अंग हो’’, बाल्टिमोरस्थित मर्सी मेडिकल सेन्टरका एडोल्सेन्ट गाइनोकोलोजी एण्ड वेल वुमेन केयरका डाइरेक्टर क्रिश्टाइन ओ कोनोर भन्छन् । यो आफ्नो ठाउँमा टेम्पोन (महिनावारी भएको बेला रगत सोस्न योनीभित्र राखिने रुवा वा कपडाको सामान, जुन भिजेपछि फैलिने गर्छ र रगतलाई चुहिन दिँदैन) लाई अड्याएर राख्न सक्ने गरी सानो हुन सक्छ भने एउटा सिंगो बच्चालाई त्यसबाट पार गराउन सक्ने गरी फैलिन सक्ने पनि हुन्छ ।
यस्तो किन हुन्छ भने योनीका भित्री भित्ताहरु हाम्रा आमाशयसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ, त्यो प्रयोग नहुँदा एकअर्कामाथि खप्टिएर पत्रपत्र बनेर बसेको हुन्छ, जुन आवश्यक पर्दा फैलिन सक्छ ।
महिलाको योनीको आकारलाई नाप्ने काम सामान्यतः सबैभन्दा पहिले सन् १९६० को दशकमा मास्टर एण्ड जोनसनले गरेको कार्यबाट थालनी भएको पाइन्छ । उनीहरुले कहिल्यै गर्भवती नभएका १०० महिलाहरुमाथि परीक्षण गरेर हेर्दा सामान्य अवस्थामा महिलाहरुको योनी २.७५ इन्चदेखि ३.२ इन्चसम्म हुने गरेको पाएका थिए ।
तर तिनै महिलाहरु कामोत्तेजित हुँदा त्यो बढेर ४.२५ देखि ४.७५ इन्चसम्म भएको पाएका थिए । तर योनी कत्रो छ भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यौनक्रियामा योनीको बाहिरी एक तिहाई हिस्साले मात्रै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मानिएको छ ।
तर महिलाको योनीको लम्बाईले यौन सन्तुष्टिमा कसरी भूमिका खेल्छ भन्नेबारे कसैलाई पनि एकिन थाहा छैन ।
विज्ञहरुका अनुसार, यो एक्सरसाइज गर्न सजिलो छ । विशेष गरेर मुत्रत्याग गर्दा सकेसम्म च्याप्ने वा रोक्ने, अलिकति मुत्र त्याग गर्ने फेरि च्याप्ने– यो प्रक्रिया केहीबेर दोहो¥याउने । अर्को तरिका भनेका योनीभित्र औंला छिराउने र त्यसलाई योनीको मांशपेशी खुम्चाएर चेप्ने । करिब १० सेकेन्डसम्म च्यापिराख्ने र छाड्ने । यो प्रक्रिया एक पटकमा १० देखि २० चोटी गर्ने र दिनमा ३ पटकसम्म गर्ने । यो व्यायाम गर्दा सकेसम्म श्वास सामान्य तरिकाले छाड्ने र खुट्टा पेटका मांसपेशीहरु सकेसम्म नखुम्च्याउने । यसो गरेमा योनी क्षेत्रका मांसपेशीहरु कसिलो बन्न मद्दत पुग्छ ।
www.webmd.com बाट साभर